အိမ်ထောင်စုဓာတုပစ္စည်းထံမှ Ammonium နိုက်ထရိတ် Make
မီးရှူးမီးပန်းများရာသီဖွင့်လာမယ့်တာဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ငါအသစ်ကမီးရှူးမီးပန်းများစီမံကိန်းများသို့ရမီ, ငါ pyrotechnics အတွက်အသုံးပြုမယ့်ဘုံဓာတုများ၏ပေါင်းစပ်ဖုံးလွှမ်းရန်လိုချင်: Ammonium နိုက်ထရိတ်။ နောက်ထပ် ပျော်စရာစီမံကိန်းကို Ammonium နိုက်ထရိတ်နှင့်အတူကြိုးစားကြဖို့ endothermic တုံ့ပြန်မှုလုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တစ်ဦးစင်ကြယ်သောဓာတုအဖြစ် Ammonium နိုက်ထရိတ်ကိုဝယ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သင်ချက်ချင်းအအေးထုပ်ဒါမှမဟုတ်တချို့ဓာတ်မြေသြဇာကနေစုဆောင်းထားနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအမိုးနီးယားနှင့်အတူနိုက်ထရစ်အက်ဆစ်တုံ့ပြန်ခြင်းဖြင့် Ammonium နိုက်ထရိတ်ပါစေနိုင်ပါသည်, သို့သော်သင်နိုက်ထရစ်အက်ဆစ်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး (သို့မဟုတ်ပါကအတူရှုပ်ထွေးချင်ကြဘူး) ပါလျှင်, သင်အလွယ်တကူမရရှိနိုင်ပါအိမ်မှာဓာတုပစ္စည်းထံမှ Ammonium နိုက်ထရိတ်ပါစေနိုင်ပါတယ်။
(pH ကိုလျှော့ချဖို့အသုံးပြုရေကူးကန်ဓာတုပစ္စည်းနှင့်အတူတွေ့ရှိရ) 138 ဂရမ်ဆိုဒီယမ် bisulfate
တစ်နိုက်ထရိတ်ဆား 1 မှဲ့ညီမျှ ... အောက်ပါမဆို
85 ဂရမ်ဆိုဒီယမ်နိုက်ထရိတ် (ဘုံအစားအစာဓါတ်)
(သင်မဝယ်သို့မဟုတ်နိုငျသော 101 ဂရမ်ပိုတက်စီယမ်နိုက်ထရိတ် သင်ကိုယ်တိုင်လုပ် )
118 ဂရမ်ကယ်လစီယမ်နိုက်ထရိတ် (tetrahydrate)
(HEET လောင်စာကုသမှုအဖြစ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်ထားတဲ့ optional ကို) Methanol
ရေ mininum ငွေပမာဏ (300 ခန့် ml) အတွက်ဆိုဒီယမ် bisulfate ပျော်။
Next ကိုသငျသညျအတော်လေးအက်ဆစ်သောဖြေရှင်းချက်ကြားချင်တယ်။ အရောအနှောများသော pH7သို့မဟုတ်ပိုမြင့်သည်အထိအမိုးနီးယားမှာရှိတဲ့မွှေပေးပါ။ တစ်ဦးသော pH မီတာ (သို့မဟုတ်သုံးပါ သော pH စက္ကူ ) ။ တုံ့ပြန်အမိုးနီးယား, ဆိုဒီယမ် bisulfate နှင့်နိုက်ထရိတ်ကိုသင်ဆိုဒီယမ် sulfate နှင့် Ammonium နိုက်ထရိတ်ကိုငါပေးမည်။
ဆိုဒီယမ် sulfate နှင့် Ammonium နိုက်ထရိတ်ကိုရေ၌ကွဲပြားခြားနားသောပျော်ဝင်ရှိသည်, ဒါ crystallize ဖို့ဆိုဒီယမ် sulfate ရဖို့ဖြေရှင်းချက်ကိုပြုတ်။ သည့်အခါဆိုဒီယမ် sulfate ပုံစံ crystals ဒယ်အိုး၏အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့အပူကနေအရည်ဖယ်ရှားပါ။
ဖြေရှင်းချက်ထဲက drop ဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ဆိုဒီယမ် sulfate ၏အဖြစ်အများကြီးရရန်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာပလပ်စတစ်ဖြေရှင်းချက် Chilling ။
အဆိုပါ Ammonium နိုက်ထရိတ်ဖြေရှင်းချက်ကနေအစိုင်အခဲဆိုဒီယမ် sulfate ခွဲခြားရန် filter ကို (ကော်ဖီ filter ကိုသို့မဟုတ်စက္ကူလက်သုတ်ပုဝါ) မှတဆင့်ဖြေရှင်းချက်ကို run ။
အဆိုပါ Ammonium နိုက်ထရိတ်ဖြေရှင်းချက်အချို့ဆိုဒီယမ် sulfate ညစ်ညူးအတူသငျသညျ Ammonium နိုက်ထရိတ်ပေးတော်မူမည်ဟူသော, အငွေ့ပျံခွင့်ပြုရန်။ ဤသည်အများဆုံးဓာတုဗေဒစီမံကိန်းများအတွက် '' အလုံအလောက်ကောင်းသော '' ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျနောက်ထပ် Ammonium နိုက်ထရိတ်စင်ကြယ်စေလိုလျှင် Methanol ၏ 500 ခန့် ml ထဲမှာပျော်။ အဆိုပါဆိုဒီယမ် sulfate မဟုတ်ပါဘူးနေစဉ် Ammonium နိုက်ထရိတ်, Methanol အတွက်ပျော်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ filter ကိုနှင့် Ammonium နိုက်ထရိတ်၏အဖြေတစ်ခုပေါ်တွင်သင်ဆိုဒီယမ် sulfate ပေးမည်သော, တစ်သီးသန့်စစ်ထုတ်ရန်မှတဆင့်ဖြေရှင်းချက်ကို run ။
အဆိုပါ Methanol ပုံဆောင်ခဲ Ammonium နိုက်ထရိတ်ရရှိရန်ဖြေရှင်းနည်းကနေအငွေ့ပျံဖို့ခွင့်ပြုပါ။
ဤစီမံကိန်းများတွင်အသုံးပြုသည့်ဓာတုအနံ့များနှင့်တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်ဤစီမံကိန်းသည်တစ်အငွေ့ပါးပျဉ်းအောက်တွင်သို့မဟုတ်အိမ်ပြင်ဖျော်ဖြေရပါမည်။ အမြဲအဖြစ်, လက်အိတ်, မျက်စိကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်သင့်လျော်သောအဝတ်အစားဝတ်ဆင်။ အဆိုပါဓါတ်ကူပစ္စည်းနှင့်နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်၏အချို့မီးလောင်လွယ်သို့မဟုတ် oxide ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ကွယ်ပျောက်ဖွင့်ထားမီးတောက်များကနေဓာတုပစ္စည်းစောင့်ရှောက်လော့။ NurdRage တစ်အံ့သြစရာ YouTube ကိုဗီဒီယိုသည်ဤတုံ့ပြန်မှုများ၏ခြေလှမ်းများရှင်းလင်းခြင်းနှင့်လမ်းတစ်လျှောက်မျှော်လင့်ထားရန်သင်သည်အဘယ်သို့ဖေါ်ပြခြင်းရှိပါတယ်။
စကျင်ကျောက်များနှင့်ရနံ့စက္ကူ Make လုပ်နည်း
Nitrocellulose သို့မဟုတ် Flash ကိုစက္ကူ Make လုပ်နည်း
ဟယ်လိုဂျက်ဏ Lantern Cool
School တွင်သိပ္ပံတရားမျှတသောစီမံကိန်းအကြံပြုချက်များ: မှတ်ဉာဏ်
ကောင်းကင်တမန်သင့်လျှို့ဝှက်ချက် Thoughts ကိုသိပါသလား?
2008 PPV အတွက်ရလဒ်များ & ပြန်လည်စုစည်းမှု
မက္ကစီကိုအတွက် Zapotec ဆိုက်ကိုမှာ Monte Alban မှာအဆောက်အဦး J ကို
တစ်ဦး 9th အဆင့်စာဖတ်ခြင်းစာရင်းများအတွက်စာပေဂန္ထဝင်အလုပ်လုပ်
မက္ကဆီကန်အမေရိကန်စစ်ပွဲ 101: ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
နို့ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ မှစ. သဘာဝပလတ်စတစ် Make လုပ်နည်း
မက္ကဆီကိုတော်လှန်ရေး 8 အရေးကြီးပြည်သူ့
Unitarian Universal ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဘုရားကျောင်းလား?
အဆိုပါသာလျှင် Par-4 Hole-In-One ကို PGA Tour သမိုင်းထဲမှာ၏ Amazing Story
အိုလံပစ်ချင်းမတူသောအ Follow ဖြစ်ရမည်ဒါကစည်းကမ်းများ
မာကျူရီ Retrograde အတွက် Is ဘယ်အချိန်မှာအဘယ်အရာကိုရီးရဲလ်ဘဝအတွက်ဖြစ်သွားမလဲ
သင်ကခရစ်စမတ်မတိုင်မှီက "အားလပ်ရက်" Quotes Read ဖြစ်ရမည်5အကြောင်းရင်းများ
Aeschylus - ဂရိအဖွစျဆိုးစာရေးဆရာကိုယ်ရေးဖိုင်